Antsa tononkalo :: Hifarimbona amin’ny « MAHATSANGY » i Ranoe, Toly ary i Zo Maminirina • AoRaha
Antsa tononkalo Hifarimbona amin’ny « MAHATSANGY » i Ranoe, Toly ary i Zo Maminirina
Tonga indray ny fotoana hifanomezan’ireo poeta avy ao amin’ny Faribolana Sandratra amin’ireo mpankafy azy. Hanolotra ny amboaran-tononkalo « Mahatsangy » hifarimbonan’i Ranoe, i Toly ary i Zo-Maminirina etsy amin’ny Cercle Germano Malagasy (CGM/GZ) Analakely ity fikambanana ity, amin’ny sabotsy 26 oktobra ho avy izao.
Samy manana sangan’asa miisa roapolo avy izy telo mirahalahy ireo. Navondrona ao anatin’io amboara iray io izany ka hatolotra ny mpankafy amin’io sabotsy io. Tsy zoviana amin’ny rehetra intsony ny fahaizan’ny mpanakanto tsirairay. Mahasahana tokotanin-tsorakanto maro ny aingan’izy ireo. Manomboka any amin’ny trangam-piarahamonina, ny tontolo iainana, ny politika ary indrindra ny fitiavana izay toa zary tsy afa-misaraka amin’ireo riman’ny poeta. Mahalana ny fotoana isehoan’izy telo mirahalahy an-tsehatra sy ny famoahany ny bokiny. Sehatra iray izany ity hetsika ity hahafahana mifanerasera sy mitafa amin’izy ireo.
Eo am-piandrasana ny fahatongavan’io fotoana io. Hitohy any Fianarantsoa rahampitso alakamisy, 10 oktobra ny fanamarihana ny faha-30 taona nijoroan’ny Faribolana Sandratra. Entina any an-toerana ny fampirantiana natomboka tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Hisy ihany koa ny fanomezan’ny minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina mari-boninahitry ny kanto ho an’ireo mpiray faribolana ao amin’ny Sampana Fianarantsoa sy ny manodidina. Mitohy amin’ny zaikabe hihaonan’ireo mpikambana manerana ny Nosy ao an-toerana izany, ka tsy hifarana raha tsy ny alahady 20 oktobra.
Mozika milanto :: Hampihetsi-po ny Malagasy mpitia kalo klasika ny « Hiakan’ny Parisy »
Fiverenana an-tsehatra :: Hanolotra seho ranoiray etsy Mahamasina i Poopy